बाँकेका ३२४ संक्रमित कुन तहका कति ? – Merokhushi
बाँकेका ३२४ संक्रमित कुन तहका कति ?
मेरो खुसी । ४ असार, २०७७ बिहीबार १२:५० मा प्रकाशित
स्रोत : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके
नेपालगन्ज : नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण भएका जिल्लाको सूचीमा बाँके ५औं स्थानमा छ । नेपालमा बैभन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला रौतहट (८९२), दोस्रोमा कपिलवस्तु (६४९), तेस्रोमा दैलेख (६३१) र चौथोमा सर्लाही (५१८) हुन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा बिहीबारसम्म तीन सय २४ जना संक्रमित रहेकोमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । एक सय ९५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित नरैनापुर गाउँपालिकामा एक सय १८ जना छन् । तीमध्ये एक सय १७ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । एक जनाको भने मृत्यु भएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम संक्रमित कोहलपुरमा पाँच जना मात्र छन् । राप्ती सोनारीमा ४७, जानकीमा ४१, नेपालगन्जमा ४०, खजुरामा ३१, डुडुवामा २७ र बैजनाथमा १५ जना संक्रमित छन् ।